१२.७२% बोनसको मात्र मूल्य समायोजनपछि सिद्धार्थको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » १२.७२% बोनसको मात्र मूल्य समायोजनपछि सिद्धार्थको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
काठमाडौं - सिद्धार्थ बैंकले १४% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर पनि नेप्सेले भने १२.७२% को मात्र मूल्य समायोजन गरेको छ । १२.७२% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि बैंकको सेयर कारोबार ३१२ रुपैयाँ प्रतिकित्तालाई आधार मानेर खुलेको छ । यसको औसत आधार मूल्य भने ४०२ रुपैयाँ छ ।
सिद्धार्थले अहिले बिक्री गरिरहेको १०% हकप्रद सेयरमा यसअघि नै मूल्य समायोजन भइसकेको छ । यसकारण बोनसमा मूल्य समायोजन गर्न बोनसदर घट्न गएको हो । मूल्य समायोजनका लागि बोनसदर घटे पनि बैंकले दिने बोनस सेयर भने १४% नै रहनेछ । बैंकले चैत ४ गते वार्षिक साधारण सभा गरेर यो बोनस प्रस्ताव पारित गर्ने जनाएको छ ।